on Sun Sep 26, 2010 9:10 am
Windows7မှာ Keyboard Shortcuts အသစ်တွေ တော်တော်များများပါလာပါတယ်။ Shortcut တွေကို သိထားခြင်းအားဖြင့် အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ပိုမိုမြန်ဆန်တာမို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Alt+Tab ကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဖွင့်ထားတဲ့ Window တွေကို ပြောင်းချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ သုံးခဲ့ကြတယ်။ အခု7မှာတော့ Ctrl+Alt+Tab ဆိုတာ ပါလာပါတယ်။ Alt+Tab လို နှိပ်ထားစရာ မလိုပါဘူး။ Ctrl+Alt+Tab ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ လောလောဆယ်ဖွင့်ထားတဲ့ Window တွေကို Box တစ်ခုနဲ့ ပြပေး ထားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ပြောင်းချင်တဲ့ဝင်းဒိုးပေါ်မှာ မောက်စ်နဲ့ တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Change the size of icons on the desktop.
Desktop ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ Desktop ပေါ်က icon တွေရဲ့ အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲချင်ရင် Ctrl ကို ဖိထားပြီး Mouse က Scroll Wheel ကို လှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ဖွင့်ထားတဲ့ Window တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းပေါ်ချင်ရင် သုံးလို့ရပါတယ်။ Alt+Tab လို ပုံစံမျိုး ပေမဲ့ Alt+Tab လို box ပေါ်မလာဘဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းပေးသွားမှာပါ။
Display the address bar list in Windows Explorer.
Windows Explore ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ Address bar ကို ဖွင့်ချင်ရင် F4 ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
A ဆိုတဲ့ Folder လေးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ အဲဒီ A ထဲမှာရှိတဲ့ B ဆိုတဲ့ Folder လေးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ B ပွင့်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ A Folder အောက်ကို ပြန်ရောက်ချင်ရင် Alt နဲ့ Up arrow ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Taskbar မှာ ပေါ်နေတဲ့ Program တွေ၊ Window တွေရဲ့ Preview ကို တစ်ခုချင်းစီ ကြည့်ချင်ရင် Windows logo Key နဲ့ T ကို တွဲနှိပ်လိုက်ပါ။
ဆိုပါစို့။ Notepad ဖွင့်တယ်၊ ပြီးတော့ Calculator ဖွင့်ထားတယ်။ အဲဒီတော့ Taskbar မှာ Notepad icon နဲ့ Calculator ရဲ့ icon လေးပေါ်နေတယ်။ Notepad က ပထမ၊ ပြီးမှ Calculator က ဒုတိယ အနေနဲ့ ပေါ်နေတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ Notepad ကို မြင်ကွင်းရှေ့ ပေါ်လာစေချင်ရင် Windows logo key နဲ့ 1 ကို နှိပ်ကြည့်ပါ။ Calculator ကို မြင်ကွင်းရှေ့ ရောက်စေချင်ရင်တော့ Windows logo key နဲ့2ကို နှိပ်ကြည့်ပါ။
Shift+ Windows logo Key + number
အစောကအတိုင်းပဲ။ Notepad ဖွင့်ပြီး Calculator ဖွင့်မယ်ဗျာ။ Shift ရယ် Windows logo key ရယ် 1 ရယ် နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ နောက်ထပ် Notepad အသစ်တစ်ခု ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ။ Shift ရယ် Windows logo key ရယ်2ရယ် နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Calculator အသစ် ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
Current date/time is Tue Mar 19, 2019 10:45 pm